Football Khabar » सिटीको ‘नम्बर वान टार्गेट’मा एमबाप्पे : कति तिर्न सक्छ ?
सिटीको ‘नम्बर वान टार्गेट’मा एमबाप्पे : कति तिर्न सक्छ ?
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले फ्रेन्च क्लब पिएसजीका युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पे भित्र्याउन विश्व रेकर्ड बनाउने गरी पैसा खर्चिने योजना बनाएको छ । हाल २० वर्ष पुगेका फ्रेन्च फरवार्ड एमबाप्पे यतिबेला पिएसजीमा प्रमुख भूमिकामा छन् । उनी तत्कालै पिएसजी छाड्ने अवस्थामा छैनन् ।
इंग्लिस मिडियाका अनुसार सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै एमबाप्पेजस्ता युवा र क्षमतावान् खेलाडीका लागि जुनसुकै क्लबले जति पनि पैसा खर्चिन सक्ने बताएर आफ्नो योजनामा पनि एमबाप्पे रहेको जनाउ दिएका छन् । ग्वार्डिओलाले एमबाप्पे युवा र द्रुत गतिका खेलाडी भएकाले सिटीका लागि दीर्घकालीन खेलाडी बन्ने पनि बताए ।
‘उनी एकदमै क्षमतावान् गोल मेसिन खेलाडी हुन्, जो युवा छन् । उनलाई अहिले जसले भित्र्याउन सफल हुन्छ, त्यो क्लबलाई कम्तीमा १२ वर्ष ढुक्क हुन्छ,’ ग्वार्डिओलाले भने ।
मिडिया रिपोर्टअनुसार ग्वार्डिओलाकै योजनामा सिटीले सिजन २०१९/२० सकिएपछि एमबाप्पे अनुबन्धका लागि महत्त्वकांक्षी योजना बनाएको छ । त्यसका लागि ऊ विश्वीर्तिमानी मूल्य खर्चिन पनि तयार देखिन्छ ।
एमबाप्पे आधुनिक फुटबलका सबैभन्दा महँगा ‘मार्केट भ्यालु’ भएका फुटबलर हुन् । उनी पिएसजीकै ब्राजिलियन नेइमार र बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सीभन्दा पनि अघि छन् ।
एमबाप्पे भित्र्याउन स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले पनि चासो दिइरहेको छ । उसले पनि आगामी सिजन एमबाप्पे अनुबन्धका लागि प्रयास गर्ने योजना बनाएको छ । रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले एमबाप्पे रियलका लागि सही खेलाडी भएको केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति ६ श्रावण २०७६, सोमबार १२:४२